Ohatra amin'ny famolavolana mailaka HTML amin'ny fampiasana sarimiaina
Talata, Oktobra 20, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Scott Hardigree
Voalaza fa ny famoronana mailaka miorina HTML amin'ny taona 2009 dia toy ny famoronana pejy web tamin'ny taona 1999. Mampalahelo nefa marina izany. Ny kaody dia taloha ary raha ampitahaina amin'ny tranokala maoderina 2.0 tsy mandeha amin'ny asany dia goavana ny fetrany.
Ka rehefa te hampita fihetsiketsehana ny mpivarotra mailaka dia arosoy ny làlan'ny maso sy ny antso-to-action dia mampiasa GIF mihetsika izy ireo. Talohan'ny Flash, ny sarimiaina GIF tsotra no filaharan'ny andro.
Mitombo ny fampiasana mailaka mihetsika. Nahoana ianao no manontany?
Ireo GIF sarimiaina dia tohanan'ny mpanjifa mailaka lehibe sy ny interface webmail
Manampy ireo mpivarotra hiavaka amin'ny vahoaka izany
Ny tena zava-dehibe dia toa miasa izy ireo!
ROI matanjaka kokoa miaraka amin'ny Animation
Ity farany Fitsapana A / B avy amin'i BlueFly dia nahita mailaka mihetsika mitaona fidiram-bola 12% bebe kokoa noho ny mitovy tsy mihetsika. Toy izany koa, ity tranga fianarana ao amin'ny Marketing Sherpa, Lake Champlain Chocolates dia niaina fitomboana 49% tamin'ny Krismasy mifandraika amin'ny fampielezan-kevitra mampiasa GIF mientana raha oharina amin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny taona lasa.
Tombony bebe kokoa aza
Voalohany, ny mpivarotra dia afaka mampiasa habaka somary kely hanasongadinana ireo vokatra marobe, tolotra manokana na antso-to-hetsika, ary koa hampiakarana ny tahan'ny tsindry amin'ny horonan-tsary nampiantrano. Ireo mpivarotra an-tsaina koa dia afaka mampiasa sary mihetsika mba hamporisihana ny fikororohana amin'ny mailaka lava (na marindrano).
Ny olana mifanentana indrindra dia ny fomba fandefasan'ireo mailaka mihetsika ao amin'ny Outlook 2007. Izany hoe, ny sary voalohany amin'ireo GIF mihetsika ihany no aseho. Ka te hampita ny hafatrao amin'ny sary voalohany ianao raha sanatria. Ianao koa dia te hitadidy fa ny haben'ny GIF mihetsika (amin'ny kilobytes) dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny hafainganana sy ny filaharana anehoana ny sarinao.
Ohatra amin'ny mailaka animated
Ohatra azo iantsoana: Banana Republic, Lexus, Piperlime
Ohatra: Faran'ny tany, Art.com
Ohatra video: hariva
Misc. Ohatra ampiasaina: Norm Thompson, Aeropostale
Miaraka amin'ny fahatakarana mafy ny tanjonao sy mpamorona mailaka za-draharaha ho azonao atao ny mampitombo ny tahan'ny click-through sy ny fiovam-po amin'ny fampiasana sary mihetsika.
Tags: Animatedsary mihetsika gifAnimationsarimiaina mailaka
Navoaka ny fandinihana fampiasana media vaovao ho an'ny mpanjifa